Inona no The Best Vintage Stores In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Inona no The Best Vintage Stores In Eoropa
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 11/09/2020)
Rehefa hitady boaloboka tsara indrindra fivarotana any Eoropa, ianao tsy amin'ny handrandraiko ho an'ireo farantsa tsy mety lany andro. Ianao dia nitondra ny diany nidina fahatsiarovana làlan sy trandrahana tantara. Ny fivarotana Vintage Mitovy amin'ny ny lamaody tranom-bakoka, manoro ny tanàna ny kolontsaina sy ny tantara. Tianay trandrahana sy vaovao mampientam-po tanàna lamasinina, ary fitadiavana tsy manam-paharoa ary tsy mety lany andro akanjo dia fomba iray mahafinaritra ny mba hanao zavatra. Ireto ny Tsara indrindra any Eoropa Vintage fivarotana sy ny fomba ahatongavana any amin'ny Train.
Best Vintage fivarotana any Europe Paris: Free P Star
Toy ny faharoa nitsidika indrindra renivohitr'i Eoropa, Paris mifandray tsara ary azo idirana. Lavitra dia afaka mahazo any Paris mora foana lamasinina avy amin'ny ankamaroan'ny firenena manodidina toy ny Belzika, Espaina, Holland, UK, Alemaina, ankoatry ny zavatra hafa mampiasa SaveATrain.
Raha vao haingana nankatỳ ianao eny ny fiaran-dalamby, ny voalohany dia ho fijanonana mba hanafaka P Star. raha, toa antsika, ianao tia ny zava-drehetra Retro, dia tsy jaunt ny endriny, renivohitr'i Eoropa no ho tanteraka tsy misy fijanonana ho an'ny mahatalanjona mikorontana Free P Star. Tsy toy ny hafa Vintage fivarotana any Paris, FREE'P'STAR tsy mivarotra fotsiny frantsay X-tanana akanjo. Izy ireo mivarotra akanjo faharoa-tanana avy any Etazonia, ary koa indraindray na dia zavaboary vaovao vita amin'ny lamba tonta notafiny. Misy isan-karazany be ny tena competitively priced Vintage akanjo sy ny Accessories avy any amin'ny taona 70’ tsara ny alalan 'ny taonjato faha-21.
Feno ny harato ny boaloboka vatosoa ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny toeram-pivarotana no mandeha ny farany ho an'ny zokiolona-to-tanana faharoa mpiantsena izay vonona ny mihady lalina mba hahazoana ny lamaody no mahita.
Tapakila fiaran-dalamby any Dijon ho any Paris
Tonga amin'ny tapakilan'ny lamasinina any Paris
Tapakila fiaran-dalamby any Lille mankany Paris
Fitsidihana ny tapakilan'ny lamasinina any Paris
Best Vintage fivarotana any Berlin: Mihirà Blackbird
Ianao dia afaka tonga Berlin avy amin'ny toro-lalana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fifadian-kanina InterCityExpress, InterCity, EuroCity, ary InterRegio Lamasinina. Ny toerana afovoany vaovao Berlin Hauptbahnhof ao am-Berlin nosokafana tao 2006 ary ny hevitra vaovao ho an'ny lalamby sy ny peo tao Berlin dia napetraka. rehetra gara tsara ny mifandray amin'ny rafitra fitateram-bahoaka, ka hanaovany ny lalana misy faran'izay mora, ary takatry ianao raha mampiasa Save A Train mazava ho azy.
Raha Paris Mety ho iray amin'ireo toerana nitsidika indrindra any Eoropa, Berlin dia mieritreritra an-trano ny sasany amin'ireo fomba swankiest eny an-dalana any Eoropa. Tsy mahagaga izany avy eo, fa Berlin no tian-dry zareo ny sasany amin'ireo Best Vintage fivarotana any Eoropa. Ny iray amin'ireo favoris manokana ho Mihirà Blackbird. Miorina ao amin'ny distrika arty ny Neukolln ny faharoa-tanana ny fitodian-tsambo Mitambatra ekilekitika fanangonana ny boaloboka niakanjo ny akanjony sy ny fisotroana kafe izay specializes amin'ny Vegan sakafo. Mahatsapa izany isika manome azy tena antony lelan sy ny maro hafa ny hijanona sy fivarotana, ka hano! Izany dia mirage ny mpamorona farantsa avy any amin'ny taona 70’ ho any amin'ny taona 90’ ary koa ny tanana matsiro treats, Mihirà Blackbird dia mpandresy ho an'ny rehetra foodie fashionistas!
Bremen mankany Berlin tapakila fiaran-dalamby
Leipzig mankany tapakila lamasinina any Berlin
Tiket ny fiaran-dalamby any Berlin
Hamburg ho any Berlin tapakila fiaran-dalamby
Best Vintage fivarotana any Amsterdam: ZIPPER
Aza manaiky ho voafitaka ny fahatsapana voalohany. Ity tsena mijery kely avy any ivelany, fa indray mandeha ianao mandeha mamaky ny varavarana, ianao traikefa ny ody avy hatrany. Ianao mahita ny iray amin'ireo lehibe indrindra faharoa-tanana fivarotana in Amsterdam manasongadina rihana roa cavernous nifanizina feno akanjo Vintage, tafasaraka iray mezzanine sehatra natokana ho Accessories.
Ny fivarotana restocks foana ka miaro ny zavatra madio sy vaovao. Na dia ny fifidianana mihetsiketsika amin'ny manjaka-sy-mikoriana ny lamaody ankehitriny, Zipper mitandrina foana ny talantalana Evergreen ahitana faritra feno entana toy ny pataloha jeans, tafika palitao, ary flannel lobaka.
Brussels mankany Amsterdam tapakila fiaran-dalamby
Tapakila fiaran-dalamby ao Amsterdam
Berlin ho any Amsterdam tapakila fiaran-dalamby
Tapakila fiaran-dalamby any Paris
Best Vintage fivarotana any Barcelona: ka mitsingevaheva
Mijoro ho tahaka ny ara-kolotsaina renivohitr'i Katalonia, Barcelona manana Avant tena manavao nefa mihevitra mpanao fahagagana. Fanatitra trano maoderina, Moyen Âge EDIFICES, famoronana nahandro, ary naresaka nightlife. Barcelona dia iray amin'ireo ambony Eoropa Travel toerana. Ary satria isika dia niakatra ho any an Summer, fa momba ny hahazo be atao faran'izay. Ka ho azo antoka anao boky ny saran-dalana Tany am-boalohany ao amin'ny SaveATrain. Tsy vitan'ny hoe Barcelona an-trano ny sasany amin'ireo Best Vintage fivarotana any Eoropa, fa izay koa ny iray amin'ny malaza indrindra Summer fialan-tsasatra toerana. In eo mihinana matsiro Tapas ary tanning amin'ny iray amin'ireo maro tora-pasika, maka fotoana mba hitsidika ka mitsingevaheva. Boutique Vintage io tsara tarehy no misy ao amin'ny faritra falehan'ny olona Teraka. Feno ny tanana-voafantina ny akanjoko, kitapo, firavaka sy ny kiraro, snazzy ity boloky hazo fivarotana akanjo Vintage avy amin'ny folo taona ny taonjato faha-20.
Raha rendrarendra no zavatra, dia efa tonga any amin'ny toerana. ka mitsingevaheva Retro dia manasongadina ny sombintsombin'ny Chanel, Yves Saint Laurent, ary Christian Dior, manao izany ny tonga lafatra toerana miantsena raha te-mampiditra ny sasany pizzazz ao amin'ny vanim-potoana fitafiana ity.
Geneva: Ny vet 'Shop
Geneva dia tanàna nofy noho ny toerana tsy manam-paharoa sy mahafinaritra fiheverany ny Mont-Blanc. Ny tendrony avo indrindra any Eoropa. The ambanivohitra, ny tonga lafatra toerana asa ivelan'ny trano, ihany minitra vitsivitsy miala ny tanàna. Geneva is the best starting point to visit the rest of Soisa noho ny fitateram-bahoaka tena tsara fifandraisana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby.
Mety hieritreritra .... Izany no tsara Info sy ny rehetra, fa aiza ny fitafiany teo, ankizivavy?! fantatro, Geneva Mety tsy ho fantatra ho toy ny tanàna mitsitsy, fa izany no mahatonga anay ao ve ianao. Mba hanavahana ny harena miafina fa tianao izany. Fa ny vola mitady mafy ny mpandeha ny Vintage ny lalao nefa tsy voatery mivarotra ny fanahiny, Ny vet 'Shop in Geneva no lalana mandroso!
Part ny Soisa Vokovoko Mena, ny fiotazam-boalobok'i magazay no lamaody kokoa noho ny fiantrana orientated fivarotana mitovy. Tsy afa-mivarotra tanana-Retro naka akanjo avy amin'ny marika malaza toy ny Givenchy sy Celine. Noho izany, na ianao tia ny faharoa-tanana lamaody ho an'ny etika, ara-politika na ara-toekarena antony, Zahao hoe Ny vet 'Shop. Tsy vitan'ny hoe ny vola mandeha mankany amin'ny fanampiana ireo izay mila izany, fa ho tonga soa hafa koa ny lanitra-avo Soisa vola vidin'ny tanàna!
Tapakila fiaran-dalamby ao Lyon mankany Geneva
Tapakila fiaran-dalamby Zurich mankany Geneva
Tapakila fiaran-dalamby Bern ho any Genève
Vonona ho snazzy fitafiana vaovao? Vonjeo ny vola ho an'ny akanjo sy ny boky amin'ny SaveATrain. Tsy misy saram miafina ary mahazo au livre mora foana! 😎
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-vintage-stores-europe%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / nl ny / en na / X sy ny maro hafa fiteny.
10 Mahafatifaty fiarovana any Frantsa By Train
Fiaran-dalamby Frantsa, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe